MSF waxa ay ku baaqeysaa in la ixtiraamo xuriyadda socodka/dhaqdhaqaaqa ee shaqaalaha caafimaadka - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Jineefa/Nayroobi. 5tii Jannaayo 2011, ayaa kormeerayaasha Médecins Sans Frontières (MSF) ee cusbitaalka Diinsoor, Soomaaliya, ay wakiillo ka socda Al Shabaab ay iska hor taageen in ay magaalada ka baxaan. Kormeerayaasha MSF ayaa magaalada Nayroobi kaga qaybgeli lahaa tababar caafimaad. Ilaa maantadanna lama xallin arrinta.
MSF ayaa si weyn uga welwelsan xaaladda hadda taagan. Tan iyo 2002dii, ayaa shaqaalaha caafimaadka ee MSF ay daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixinayeen cusbitalkaas oo ah kan keliya ee shaqeeya ee ka jira gobolka Baay. Barnaamijyada ay ka waddo Soomaaliya, ayaa MSF waxa ay ku tiirsan tahay oo ay hawsheeda u adeegsataa keliya deeqaha shaqsiga ah ee ay ka hesho dadweynaha caadiga ah ee ku dhaqan dunida. Maaliyaddeedana waxaa loo adeegsadaa oo keliya fulinta hawlaha caafimaadka.
In kasta oo codsiyo badan oo is-daba-joog ah loo direy maamulka, ayaa Al Shabaab aaney dhowr bilood oggolaan in ay degaanka yimaadaan shaqaale ajaanib ah oo ka socda Medecins Sans Frontieres si ay taageero farsamo oo toos ah u siiyaan cusbitaalka, arrintan ayaa ah mid wax u dhimeysa tayada daryeelka ay helayaan dadweynaha oo ahna mid su’aal gelineysa sii socoshada taageerada ay MSF siiso cusbitaalka.
“MSF waxa ay dhammaan dhinacyada kala duwan ee Soomaaliya ku dhiirrigelineysaa in ay ixtiraamaan ayna ilaaliyaan dhammaan dhismayaasha iyo shaqaalaha caafimaadka. Gaar ahaan marka ay timaaddo degaannada Diinsoor oo kale ah ee ay goobaha caafimaadku ay ku yar yihiin. Maamullada ayaa looga baahan yahay in ay bixiyaan dhammaan gacan-siinta la heli karo si ay shaqaalaha caafimaadka uga soo baxaan waajibaadkooda. Xoriyadda socodka/dhaqdhaqaaqa ee dhammaan shaqaalaha caafimaadka, kuwa caalamiga ah iyo kuwa Soomaalida ahba, ayaa ah mid muhiim u ah hawl-gudashooda.” ayaa ay tiri Monica Rull, oo ah maareeyaha Barnaamijka MSF.
MSF waxa ay maamullada ugu baaqeysaa in ay joojiyaan is-hortaagidda dadaallada caafimaad ee bani’aadamnimada. Si loo hubiyo helitaanka gargaar caafimaad oo nafo lagu badbaadiyo, waxa MSF ka go’an in ay la hadasho maamullada si dadweynaha rayidka ah ee dhexda u galey iskahorimaadka Soomaaliya ay si macno leh u soo gaari karaan daryeelka caafimaadka.
In kasta oo ay jiraan culaysyo, ayaa haddana MSF ay weli tahay hay’adda ugu weyn ee adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixisa guud ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Magaalada Diinsoor, MSF waxa ay hawsheeda waddaa tas-hiilaad/xarun caafimaad oo 65-sariirood leh taas oo bixisa daryeel bukaan-jiif iyo mid bukaan-socodba. Waaxda bukaan-socodka, oo u adeegta dhammaan dadweynaha ku nool guud ahaan degmada oo lagu qiyaasey 110,000 qof, waxa ay bixisaa daryeelka caafimaadka carruurta iyo kan dadka waaweyn, daaweynta cudurrada qaaxada iyo kala azar; iyo sidoo kale quudin ku daweyn ay u sameyso carruurta ay hayso nafaqo-xumada ba’an oo ay cudurrana u weheliyaan. Waaxda bukaan-socodka waxa ay bixisaa daryeel daaweyn iyo mid ka hortag waxaana ka mid ah xarun quudin bukaan-socod oo lagu quudiyo carruurta ay hayso nafaqo-xumo ee aaney u wehelin cudurro.
Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay ka shaqeysaa toban gobol oo Soomaaliya ka tirsan, waxaana u shaqeeya in ka badan 1,300 oo shaqaale Soomaali ah oo daryeel caafimaad ku bixiya gudaha dalka. Malaayiin qof ayaa degdeg ugu baahan daryeel caafimaad, haddana farqiga weyn ee u dhexeeya baahida dadka Soomaaliyeed iyo waxqabadka bani’aadamnimada ayaa ah mid sii ballaaranaya.
MSF waa urur caafimaad oo madax-bannaan oo mashaariic ka wada toban gobol oo Soomaaliya ka tirsan. In ka badan 1,300 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageeraan in ka badan 100 shaqaale ah oo jooga Nayroobi, Kenya, ayaa bixiya daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta qaaxada iyo nafaqo-xumada, qalliin, iyo biyo iyo sahay gargaar oo ay siiyaan dadka barokacay. MSF dowladna kama qaadato maaliyad ay ku maalgeliso mashaariicdeeda ay ka waddo Soomaaliya, iyada oo ku tiirsan oo keliya deeqaha ay ka hesho shakhsiyaadka caadiga ah ee ku dhaqan daafaha kala duwan ee dunida.
MSF Gudaha Soomaaliya.
MSF waa urur caafimaad oo bani’aadamnimo oo caalami ah, oo daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah dadka ku siiya guud ahaan Soomaaliya, iyada oo aan loo eegeynin qabiilkooda iyo siyaasadda ay u xagliyaan.MSF waxa ay daryeel caafimaad oo nafo lagu badbaadinayo siineysey dadka Soomaaliyeed tan iyo 1992-dii waxaana ay maanta waddaa in ay gargaarto kumaan Soomaali ah oo ku nool guud ahaan dalka, taasna waxaa mahaddeeda leh shaqaalaheenna Soomaalida ah ee dadaalka badan oo geesiyiintana ah ee mashaariicda fulinaya.
Tags: baaq, Bay, Diinsoor, xanibaad